မုဆိုးမမိခင် နှင့် မီးမရှိတဲ့ရွာလေးကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲအမှတ်အများဆုံး၊ (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်ဝေယံလင်းကျော် – Shwe Likes
မြန်မာနို င်ငံ သမိုင်းမှာ မရှိဘူး‌သေးတဲ့ ဝိဇ္ဇာဘာ သာတွဲ၊ ၆ ဘာသာဂု ဏ်ထူး၊ အမှတ်ပေါင်း ၅၂၀ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းအောင် ဝိဇ္ဇာဘာ သာတွဲ အမှတ်အ များဆုံး Top 1 ကို ချင်းတိုင်း ရင်းသားလေး မောင်ဝေယံလင်းေ ကျာ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ကြံခင်းမြို့နယ် မှ ၁၆ မိုင်ဝေး တဲ့ ရေနံေ တာင်ကျေးရွာ ကဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲအမှတ်အများဆုံး၊ (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်ဝေယံလင်းကျော်
မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သလို၊ အထူးသဖြင့် ချင်းလူမျိုး အတွက် သူရဲကော င်းတစ်ဦး မွေးဖွားလာ တာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်င ယ်တုန်းက သူ့ဖခင် မြွေကိုက်လို့ ဆုံးပါးခဲ့ပြီး၊ မုဆိုးမမိခင်နှင့် နေရပါတယ်။ မီးမရှိ တဲ့ရွာမှာနေပြီး၊ခုထိ တယ်လီဖုန်းေ တာင်မရှိပါ။
တို့ချင်းတိုင်းရ င်းသားများ သူ့ဖခင်နေရာမှာ နေပေးကြရင် မကော င်းဘူးလား။ သူတာဝန်ကျေခဲ့ပြီ။ တို့လည်း တာဝန်ယူကြပါစို့လားခင်ဗျား။ ချင်းပြည်နယ် ကုန် သည်စက်မှု အသင်းနှင့် ဆက်သွယ်ေ ပးကြပါခင်ဗျား။ သတင်းစုံပြောပြပေးသော မြန်မာ့အသံက မမြသင်းကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ 09779370345 ဆရာမကြီး ဒေါ်ကြည်ြ ကည်စိန် ကနေလည်းဆက်သွယ် လို့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
မွနျမာနို ငျငံ သမိုငျးမှာ မရှိဘူး‌သေးတဲ့ ဝိဇ်ဇာဘာ သာတှဲ၊ ၆ ဘာသာဂု ဏျထူး၊ အမှတျပေါငျး ၅၂၀ နှငျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျ တနျးအောငျ ဝိဇ်ဇာဘာ သာတှဲ အမှတျအ မြားဆုံး Top 1 ကို ခငျြးတိုငျး ရငျးသားလေး မောငျဝယေံလငျးေ ကျြာ၊ ဧရာဝတီတိုငျး ကွံခငျးမွို့နယျ မှ ၁၆ မိုငျဝေး တဲ့ ရနေံေ တာငျကြေးရှာ ကဆှတျခူး ရရှိခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာတဈနိုငျငံလုံး ဝိဇ်ဇာဘာသာတှဲအမှတျအမြားဆုံး၊ (၆)ဘာသာဂုဏျထူးရှငျ မောငျဝယေံလငျးကြျော
မွနျမာနိုငျငံ အတှကျ ဂုဏျယူစရာဖွဈသလို၊ အထူးသဖွငျ့ ခငျြးလူမြိုး အတှကျ သူရဲကော ငျးတဈဦး မှေးဖှားလာ တာဖွဈပါတယျ။ သူငယျင ယျတုနျးက သူ့ဖခငျ မွှကေိုကျလို့ဆုံးပါးခဲ့ပွီး၊ မုဆိုးမမိခငျနှငျ့ နရေပါတယျ။ မီးမရှိ တဲ့ရှာမှာနပွေီး၊ခုထိ တယျလီဖုနျးေ တာငျမရှိပါ။
တို့ခငျြးတိုငျးရ ငျးသားမြား သူ့ဖခငျနရောမှာ နပေေးကွရငျ မကော ငျးဘူးလား။ သူတာဝနျကခြေဲ့ပွီ။ တို့လညျး တာဝနျယူကွပါစို့လားခငျဗြား။ ခငျြးပွညျနယျ ကုနျ သညျစကျမှု အသငျးနှငျ့ ဆကျသှယျေ ပးကွပါခငျဗြား။ သတငျးစုံပွောပွပေးသော မွနျမာ့အသံက မမွသငျးကို ကြေးဇူးတငျ ပါတယျ။ 09779370345 ဆရာမကွီး ဒျေါကွညျွ ကညျစိနျ ကနလေညျးဆကျသှယျ လို့ရပါတယျခငျဗြား။
အသက်(၆၈)နှစ် ကိုရောက်နေပီ ငွေ (၅) သောင်း ကို တစ်ခါမှ မကိုင်ဖူးခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ အမေအိုကြီး
ဧရာဝတီတိုင်း က ကျောင်းလု ပွဲ လား? ကျောင်း သိမ်း ပွဲလား? ဘာလား?(ရုပ်သံ)
နိုင်ငံတော် ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့မယ့်အပေါ် ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးရဲ့ ရင်တွင်းက ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်
(၃၀-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း